China ubhaka T-B3985 ukwenziwa kunye nefektri | TIGERNU
I-TIGERNU-Ukufika okutsha kobusika 2020 Indoda
Amagumbi aMaqela aLungelelanisiweyo: Ubhaka wekhompyuter kaTigernu onegumbi elithwala ilaptop ulingana neelaptop ukuya kuthi ga kwi-intshi ye-15.6, amacandelo ama-6 alungiselelwe ilaptop yakho, i-iPad, iselfowuni, usiba, izitshixo, iincwadi, iimpahla, ibhotile yamanzi nokunye, ukwenza izinto zakho zilungelelaniswe, kulula fumana into oyifunayo.
Ukhuseleko: Ubhaka weLaptop onepokotho efihliweyo emqolo ekhusela izinto zakho ezixabisekileyo kumasela.Izipper inokutshixwa ngesitshixo, ukuze ungaze ube nexhala lomntu oba izinto zakho. Ukugcina izinto zakho zikhuselekile!
Ukuthuthuzela kunye nokuLungeleka: UTigernu uhamba ngeLaptop ubhaka onogwebu opakishwe kakuhle olungele umqolo wakho ngokuqinileyo. I-Ergonomics kunye nohlengahlengiso lwe-S-shape padding emagxeni ekhulula uxinzelelo egxalabeni. Ibhanti eboshwe kakuhle ilungele ukuba ulungise ibhegi yelaptop kwityesi yakho, wenze uhambo lwakho kwaye uhambe lula naphi na apho uya khona. Nge-USB kunye nomngxuma weefowuni, unokutshaja ifowuni yakho kwaye wonwabele umculo kwangaxeshanye. ixesha.
Izinto eziHlalayo: Itigernu yeshishini leLaptop ibhegi yenziwe nge-splashproof eyomeleleyo kunye nokukrwela ilaphu elinganyangekiyo kunye ne-zipper engenamanzi eyenza ibhegi yomelele kwaye igcine izinto zakho zomile emvuleni.Izinto ezinobume bendalo, musa ukwenzakalisa impilo yakho.
Ubhaka kaTigernu ulungele ishishini, uhambo, imisebenzi yangaphandle, isikolo.
Inombolo yomzekelo I-T-B3985
Umbala: Mnyama / Mfusa / Ngwevu emnyama / Ngwevu yeSilivere / Bomvu
Ubukhulu: 29 * 42 * 16cm
Egqithileyo Ibhegi ye-Crossboy T-S8113
Okulandelayo: I-T-L5191 yebhegi yomnqamlezo
ubhaka anti ubusela
Iindawo ezinika umdla ubhaka